पेटको बोसो घटाउने हो ? यसो गर्नुहोस् - SangaloKhabar
पेटको बोसो घटाउने हो ? यसो गर्नुहोस्
धनियाँको जुस यसमा क्यालोरी निकै कम पाइनछ भने एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको प्रयोगबाट अरु कुनै समस्या आउँदैन । यसले किड्नी ठिक राख्न समेत सघाउँछ । एलोभेरा जुस एलोभेरा जुस धेरै बिरामका लागि उपयोगी ठानिन्छ । दिनमा एक कप यसको जुस पिउँदा पेटको बोसो कम हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोलको समस्या पनि घटाउँछ ।
अदुवाको रस प्रतिदिन एक चम्चा अदुवाको रस पेट कम गर्नका लागि धेरै सहयोगी हुन सक्छ । यसले शरीरको बोसो समेत बर्न गर्न सघाउँछ । खानपानमा सन्तुलन र नियमित व्यायाम फिट रहने सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २०, २०७४ समय: १३:३९:१५